Ngaba ukuThengiswa kwaBantu kuya kutshintshwa ziRobhothi? | Martech Zone
Ngaba abantu abaThengisayo baya kutshintshwa ziiRobhothi?
NgoLwesihlanu, Julayi 14, 2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Senraj Isandi
Emva koWatson waba yintshatsheli yeengozi, i-IBM ubambisene neKlinikhi yaseCleveland ukunceda oogqirha bakhawulezise kwaye baphucule amazinga okuchaneka kokuchongwa kwabo kunye nemigqaliselo. Kule meko, uWatson wongeza izakhono zoogqirha. Ke, ukuba ikhompyuter inokunceda ekwenzeni imisebenzi yezonyango, ngokuqinisekileyo kubonakala ngathi umntu unokunceda kwaye aphucule izakhono zomthengisi ngokunjalo.
Kodwa, ngaba ikhompyuter iya kuze ithathe indawo yabasebenzi abathengisayo? Ootitshala, abaqhubi, iiarhente zokuhamba, kunye neetoliki, bonke banazo oomatshini abakrelekrele Ngena phakathi kwabo. Ukuba i-53% yemisebenzi yabathengisi yile ngokuzenzekelayo, kwaye ngo-2020 abathengi baya kulawula i-85% yobudlelwane babo ngaphandle kokunxibelelana nomntu, ngaba oko kuthetha ukuba iirobhothi ziya kuthatha indawo yokuthengisa?
Kwicala eliphezulu lesikali sokuqikelela, uMatthew King, iGosa eliyiNtloko loPhuhliso lweShishini ePura Cali Ltd, uthi iipesenti ezingama-95 zabathengisi ziya kutshintshwa bubukrelekrele bokuzenzela ngaphakathi kweminyaka engama-20. IWashington Post inengqikelelo esezantsi ku nqaku yakutshanje Apho bacaphula ingxelo yeDyunivesithi yaseOxford ka-2013 ethi phantse isiqingatha sabo basebenza eUnited States basemngciphekweni wokutshintshwa bafakwe kwisimo esizisebenzisayo kule minyaka ilishumi okanye mibini izayo, njengophawu lwezikhundla njengabona basemngciphekweni. Kwaye no-Nobhala wangaphambili we-Ofisi kaNondyebo, u-Larry Summers, kutshanje uthe kude kube yiminyaka embalwa edlulileyo, wayecinga ukuba ii-Luddites zikwicala elingalunganga lembali kwaye abaxhasi betekhnoloji basekunene. Kodwa, saqhubeka sathi, Andiqinisekanga ngoku. Ke, linda! Ngaba abathengisi kufuneka bakhathazeke?
Ngethemba, ngumcimbi wokusebenza kunye hayi ngokuchasene. Umthengisi u-Einstein yinkqubo yobukrelekrele (AI) edityaniswe kuko konke ukuhlangana nabathengi kunye nokugcinwa kweerekhodi zabathengi ukuze abathengisi bazi ixesha lokuthetha into elungileyo ngexesha elifanelekileyo Abathengisi bathenga iinkampani ezintlanu ze-AI kubandakanya, iTempoAI, iMinHash, iPredictionIO, iMetaMind, kunye neImplisit Insights.
IMinHash -Iqonga le-AI kunye nomncedisi okrelekrele wokunceda abathengisi baphuhlise amaphulo.
Tempo -Isixhobo sekhalenda esiqhutywa yi-AI.
Uqikelelo lweIO - owayesebenza kwindawo yokugcina ulwazi yomatshini ovulekileyo.
Ukuqonda kwe-Implisit -Skena ii-imeyile ukuqinisekisa ukuba idatha yeCRM ichanekile kwaye inceda ukuqikelela xa abathengi bekulungele ukuvala isivumelwano.
MetaMind -Ukwenza inkqubo yokufunda enzulu enokuthi iphendule imibuzo enxulumene nokukhethwa kwesicatshulwa kunye nemifanekiso ngendlela esondeleyo ekuphenduleni komntu.
I-Salesforce ayisiyiyo kuphela kumdlalo we-AI. Kutshanje, iMicrosoft ifumene SwiftKey, Umenzi wekhibhodi enikwe amandla yi-AI eqikelela ukuba uza kuchwetheza ngantoni IiLebhu zeWand, Umphuhlisi we-AI enika amandla incoko kunye netekhnoloji yeenkonzo zabathengi, kunye Genee, Umncedisi we-AI onikwe amandla wokucwangciswa okuhle.
Njengoko uMateyu King wathi:
Zonke ezi zixhobo ziyakwazi ukuhlalutya imvakalelo yabathengi kwi-imeyile okanye kwincoko yefowuni, ukuze abathengisi kunye nabameli beenkonzo zabathengi bakwazi indlela abavakalelwa ngayo abathengi kunye nendlela abasabela ngayo kwimibuzo ethile okanye kukukhuthaza. Oku kuvumela abathengisi ukuba bafumane ulwazi malunga nendlela yokwenza amaphulo angcono ngokujolisa kubantu ngexesha elifanelekileyo ngomyalezo olungileyo ngokusekwe kukhetho olukhethekileyo lomsebenzisi kunye nemikhwa.
Kodwa, ngaba bonke obu bugcisa buza kuthatha indawo yomntu othengisayo? IWashington Post isikhumbuza Umsebenzi uzuze ngokufanelekileyo ecaleni kwemveliso kuyo yonke inkulungwane ye-19 neye-20 ngenkqubela phambili kwezobuchwephesha. Ke, mhlawumbi iya kuba ngumcimbi wabathengisi abasebenza ecaleni kweerobhothi ukuze benze umsebenzi ngcono.
Nceda ukhumbule abantu bathenga ebantwini Ngaphandle kokuba abathengi bezirobhothi abangakhathazeki ngokuthenga kwiirobhothi. Kodwa, ngokuqinisekileyo iirobhothi zilapha kwaye kungcono ukuba usebenze nazo kwaye ungenzi mpazamo inye eyenziwe nguJohn Henry: Sukuzama ukugqwesa umatshini, yenza umatshini uncede umthengisi enze. Vumela umatshini umgodi wedatha kunye nomthengisi avale isivumelwano.
tags: aikukubhadla okungeyonyaniingxoxouhlobonyanzela ukuqondaIhlobo lasehloboUMateyu KingimemamindmicrosoftminhashukuxelwaUPura CaliUkunika amandla ukuthengisaukuthengisaUmthengisi u-Einsteincwangcisaunobhala wesebe lezemalilemobileixeshaKwiYunivesithi yaseOxfordwandlabsWashington Post
USenraj ukhokela iqela lolawulo e QhagamshelaLeader Ukufikelela kwinjongo ephambili "yokugqwesa ubunjineli kunye nenkonzo enkulu kubathengi". Phambi kweConnectLeader, waseka iinkampani ezimbini eziphumeleleyo zenkonzo zesoftware ezazisebenzisa ngaphezulu kwekhulu labasebenzi eMelika kwaye zavelisa iimveliso zesoftware eziqhubela phambili kubathengi. USenraj ufumene i-MS kwisidanga seSayensi yeKhompyuter (enawona mawonga aphezulu) kwiDyunivesithi yaseMassachusetts kunye nesidanga se-BS kwezobunjineli boMbane kwiYunivesithi yaseAnna, eChennai, eIndiya. Ngo-1992, uSenraj ufumene i-'Technology National Award 'eyayivela kuMongameli wase-India ngezona zinto zibalaseleyo kwilizwe.